ramkrishna January 21, 2021	astrologyसपनामा मन्दिर गएको देखेमा के अर्थ हुन्छ ? जान्नुहोस्
हामिले सुतेको समयमा सपना देख्नु सामान्य कुरा हो । सपनामा देखेका केही कुराहरुले जीवनमा प्रभाव पार्ने ज्योतिष शास्त्रमा पनि बताइएको छ । शास्त्रमा सपनामा देखेका चीजहरुले भविष्यमा कस्तो संकेत गर्ने गर्छ भन्ने बारे बताइएको छ ।
मन्दिर गएको सपना देखेमा केही भाकल छ भन्ने बुझिन्छ । त्यसपछि आफ्नो भाकल पुरा गर्न मन्दिर जानुपर्दछ । दिव्य आश्वासन – मन्दिरको सपना देख्दा कसैले तपाईँलाई आश्वासन दिइरहेको छ भन्ने पनि बुझिन्छ । तपाईले कसैको सहाराको आश गर्नुभएको छ भने पनि सपनामा मन्दिर देख्नुहुन्छ ।
Previous Previous post: फोहोरी झिँगा कृषिमा उपयोगी, झिँगा पालेरै मासिक डेढ लाख !
Next Next post: कम्प्युटर भाईरसका प्रकारहरु, कम्प्युटर भाईरस प्रतिरोधक र बच्ने उपाय